လောင်းရဲလားဟေ့ မောင်တို့ရေ… bet | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လောင်းရဲလားဟေ့ မောင်တို့ရေ… bet
လောင်းရဲလားဟေ့ မောင်တို့ရေ… bet
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Dec 1, 2011 in Myanma News | 31 comments
ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ဘွားတော်နဲ့ မြန်မာဘွားတော် တို့နှစ်ဦး အင်းလျားလမ်း ပါဝါ၅၄ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာ တွေ့ဆုံကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘာပြောမလဲ၊ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်၊ ဟောကိန်းထုတ် ခန့်မှန်းနေကြသူ မျက်စိကြီးနားကြီး အကုန်ကြီးသူ အများအပြားရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ခြေရာလိုက်တိုင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ အဓမ္မရုပ်ဝါဒီ သဂျီးအလိုအတိုင်း မတူကွဲပြားစွာ ဖောက်ထွက်ခန့်မှန်းဖို့ အကြံရပါတယ်။ ရွာထဲမှာလဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း တင်လိုက်ရင် လက်ရှောင်သူ အတော်များတာကြောင့် ဒီတခါ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း တင်ပါမယ်။
စူပါဘွားတော်နှစ်ဦး တွေ့ဆုံကြရင် ဘယ်သူဘာအရောင် ဝတ်မှာလည်း ခန့်မှန်းစေလိုပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မနောဓာတ်အာရုံနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ ဦးဖက်တီး၊ ကိုရင်စည်သူတို့လို့ ဝေဒဝိဇ္ဇာ၊ မနောဓာတ်ပေါက်သူ ပါရမီရှင်များစွာကိုလည်း တတပ်တအား ပါဝင်ခန့်မှန်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဖြေမှန်သူကို အိမ်နားရှိ နိုင်တီးနိုင်းဆန့် အမည်ရှိ စူပါမားကက်ကြီးမှ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတခု ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ခကိုတော့ အဖြေမှန်သူက ပေးဆောင်ရပါမယ်။ (ရှစ်ပင်းခ – ၁ဝဒေါ်လာပါ။ Shipping – $5, Handling $5)
ပါရမီရှင် (ဘတ်စ်ကားလိုင်းအမည်မဟုတ်ပါ) ဦးကြောင်ကြီးခန့်မှန်းချက်။။။
ဒေါ်စု – ကြံရည်ဖျော့၊ နံ့သာ အစိမ်းနု
မစ္စကလင်တန် – အစိမ်းရင့်၊ ကျောက်စိမ်းရင့်
အကြားအမြင်ပါရမီရှင် ဦးကြောင်ကြီး :cool:
အမေစု —ဗေဒါရောင်. ပင်နီ အကျီရောင်.
ံHillary —အပြာရောင် . yellowish
စဉ်းစားကြည့်မိသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် မနောမရဘူး …
ဘာအရောင်နဲ့ပဲ ပုံဖော်ကြည့်ကြည့် လိုက်ဖက်ပြီး ကျက်သရေရှိနေတယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ် …
No No….အမေစုကအပေါ်ကအဖြူ အောက်ကအညို…ဟီလာရီကလင်တန်က အပေါ်က အကြည် အောက်ကအကြည်ရောင်။ အမေစုနဲ့တွေ့ပြီးရင်ဟက်ပီးဝေါကိုဆက်သွားမယ်
အမေစုကို ယောဂီဝတ်ခိုင်းနေတာတော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်။။။
အမေစုရော ကလင်တန်ရော အကျီဝတ်ပါမည်။
အမေစုုက မြန်မာလိုဝတ်မည် ကလင်တန်က အနောက်တိုင်းစတိုုင်ဝတ်မည်။
အရောင်က အမေစုက အဝါဖျော့
ဘာများလဲလို့၊တော်တော် စားတဲ့ ကိုကြောင်ကြီးပဲ
ကဲ Observation ကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြေကြ ဖြေကြ ။
သေခြာတာတော့ ဒေါ်စု ခေါင်းမှာ ပန်းတော့ ပန်လိပ်မယ် ငှဲ— ငှဲ။
ကျွန်တော်ထင်တာလည်း အမေစုက အစိမ်းရောင်(အစိမ်းနှင့်နွယ်သောအရောင်မျိုးကိုပါ ဆိုလိုပါသည်) ဝတ်မယ်လို့ထင်တယ် … မစ္စကလင်တန်ကတော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် အဖြူ (သို့မဟုတ်)အရောင်လွင်လွင် လေး ဝတ်မယ်ထင်တယ်ဗျ မဟုတ်ရင်လည်း လွဲတယ်လို့ မှတ်လိုက်ပါ …
ုkING လေးရေ မင်းတယ်တော်ပါလား….
အမေစုက ပင်နီနဲ ့အမဲ
ဆီလိုအပေါက်ရှာပြီး ကြံဖန် ကန့်လန့်တိုက်တဲ့
မီလယံနာ ဖြစ်ဖို့ နဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာဆိုဆိုပြီး ချွန်တွန်းလုပ်ဖို့သာ စိတ်ထဲအဓိကထားနေတဲ့
အဓမ္မရုပ်ဝါဒီ သဂျီးက METAPHYSICS သမားတွေကို ထပ်ပြီး အပြစ်တင်နေပါဦးမယ်။
ရွာထဲက အကြားအမြင်ပညာရှင်၊ ဝေဒဝိဇ္ဇာ၊ မနောဓာတ်ပေါက်သူ ပါရမီရှင်များ၊ telepathy ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်းလို့ မှန်ရင်လည်း တိုက်ဆိုင်သွားလို့။
ငါတို့ လူ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုပြီး ထထအော်နေတဲ့ သူ တွေမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်ဆိုပြီး ပြောဦးမှာဗျ။ း)
ဦးကြောင် အချိန်စော တင်ရင် ကွန်မန့် အများစုံ စံချိန် ရမှာ ။ အခုတော့ နဲနဲကပ်သွားပြီ။
ဒေါ်စု … အဖြူအောက်ခံ ပန်းရိုက် ဝမ်းဆက်
မစ္စကလင်တန်.. အပေါ်ဖြူ အောက်မဲ
တစ်ဝက်မှန်ရင်ကော ပေးမှာလား …. :grin:
အမေစု က ပိတောက်ခြောက်ရောင် ဝတ်မယ်ထင်တယ်…
နိုင်ငံခြားသူကြီးကတော့ Lady Suit အနက်ပဲနဲ.တူတယ်.. ထင်တာနော်
ဒေါ်စုက.. အရောင်ဖျော့… ပန်းရောင်(သို့) ခရမ်းရောင်
ဒေါ်ကလင်တန်က.. အရောင်တောက်.. အနီ၊(သို့) အဝါ
အိမ်နားရှိ နိုင်တီးနိုင်းဆန့် အမည်ရှိ စူပါမားကက်ကြီး = 99 Cents Supermarket = 99 Cents တန်သော ပစ္စည်းများသာ ရောင်းသောဆိုင်…။
အမြဲတမ်း ကြောင်ကြီး နှက်သမျှ ခံနေရတဲ့ သဂျီးက
ဒီတချီမှာ ကြောင်ကြီးကို လက်သီးပုန်းနဲ့ ထိုးလိုက်ပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး သဘောကောင်းလှချည်လားအောင်းမေ့တာ ဒါကြောင့်ကိုး
ဒေါ်ကလင်တန် အစိမ်းရောင် ;)
ဒေါ်စု—– rainbow ရောင်
မစ္စကလင်တန်—— rainbow ရောင်
ကံကောင်းစွာဖြင့် လွဲပါစေ ဗျာ
တွေးရခက်နေတာကတော့ ဒီအဖွားကြီးဘာလာလုပ်တာပါလိ်မ့် ???????
ကြည့်ရသလောက်ကတော့.. ဆန်ရှင်တော့.. နောက်နှစ်မှာ.. အပြီးမဖယ်ပေးလောက်ဖူး…။
ဟီလာရီက ပန်းရောင်အရင့် သို့ အနု
မယုံရင် ကြည့်လိုက် ဒန် တန် တန်…….
အကြားအမြင် ပါရမီရှင် ဦးကြောင်ကို ဒီပို ့စ်နဲ ့တင်…
အမေစုက အပေါ်က ကြည်ပြာရောင် ဖျော့ ထမီက အရင့် ခေါင်းမှာ ပန်းပန်ထားမယ်
ဟီလာရီ က ကြက်သွေးရောင် ရင့် ဝမ်းဆက်
အား လုံးမှား ပါတယ် ကွယ်။အ ဖြေ မှန် ကိုကြည့် ကြ ရအောင်.link ပေး လိုက် မယ်နော်
ကမ္ဘာကျော်သူတို့၂ယောက် .. ဖက်ရှင်ညှိဝတ်မယ် မထင်လိုက်မိဘူး…
နှစ်မျိုးဝတ်တာ တွေ့တယ်။ အခုပုံမှာ အရောင်နု၊ ဒေါ်စုအိမ်မှာတွေ့တော့ စိမ်းပြာရောင်။ ကြောင်ကြီးခန့်မှန်းတာနဲ့ သိပ်မလွဲဘူးနော်။ မနေ့က အာရုံနှစ်မျိုးရလို့ တဦးစီကို ခွဲပေးလိုက်တာ။ ပွဲနှစ်ခုဖြစ်မှန်းသိရင် ဒေါ်စုကို တယောက်ထဲ ပေးမှာပေါ့။ ဂယ်ပြောတာ မနေ့က ကျောက်စိမ်းရောင်စိုစိုမျိုးနဲ့၊ နံ့သာရောင်အနုလိုမျိုး အာရုံရလို့ ပြောလိုက်တာ။ အဓမ္မဝါဒီ သဂျီးကို ဆုံးမဖို့ အကြားအမြင် ပါရမီရှင် ကြောင်ကြီး လာဘီကွ……သဂျီးကို အရိုးအယွင်း မကျန်အောင် ဝါးစားပစ်မယ်။။။။။။။ မီညောင် ခွီး ဂရား…….။
စိတ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သဘောလို့ ယူဆပါတယ်။
ကမာ္ဘ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ တူညီတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကနေ
ကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး
(သဂျီးရေ-ဆုတောင်းတာ မဟုတ်ပါ။ ဆန္ဒပြုတာ wish ပါ။)
ကိုရင်စည်သူ ဗေဒင်ကဝိ ပညာရှိရေ- တွက်ချက်ကြည့်ပါဦး။
Ko Ko Hlaing, chief political advisor to Myanmar’s president, told the Global Times on Thursday that Myanmar hopes Western sanctions against his country could be gradually lifted following Clinton’s visit.
However, this does not mean Myanmar’s ties with China will be affected since China-Myanmar friendship hasasolid foundation, he said, stressing that developing relations with China remains the country’s top diplomatic priority.
ဘာပဲ ပြောပြော ဒို့ မြန်မာ ဝတ်စုံက ဘယ်လို ကြည့်ကြည့် တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ အိနြေရတယ်။ ကျက်သရေ ရှိတယ်လို့ ထင်မိတယ်။